မွဝတီ - ရေကြောင်း လူငယ်အခြေခံနှင့် တန်းမြင့်သင်တန်းတို့မှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ရန်ကုန်မြစ်တွင်းမှ ပင်လယ်ဝနှင့် သန်လျင်တပ်နယ်တို့သို့ လေ့လာရေး သွားရောက်
ရေကြောင်း လူငယ်အခြေခံနှင့် တန်းမြင့်သင်တန်းတို့မှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ရန်ကုန်မြစ်တွင်းမှ ပင်လယ်ဝနှင့် သန်လျင်တပ်နယ်တို့သို့ လေ့လာရေး သွားရောက်
Wednesday, 15 May 2019 08:45 font size decrease font size increase font size
ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်များနှင့် ဗျူဟာ စစ်ရေယာဉ်စုများမှ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိသည့် ရေကြောင်းလူငယ် အခြေခံနှင့် တန်းမြင့်သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂ဝ၁၉) စခန်းပေါင်းစုံမှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ ၆၂ဝ ဦးတို့သည် သင်တန်းနည်းပြများ၊ သင်တန်းအုပ်ချုပ်သူများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြစ်တွင်းမှ ပင်လယ်ဝသို့ တပ်မတော်(ရေ)မှ စစ်ရေယာဉ်များဖြင့် လေ့လာရေး ခရီး သွားရောက်ကြသည်။
လေ့လာရေးခရီးစဉ်တွင် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် စစ်ရေယာဉ်များရှိ ရေယာဉ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ လက်နက်နှင့် လက်နက်စနစ်များ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်များ၊ ရေကြောင်း သွားလာရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေ ဗဟုသုတများ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ဆိုင်ရာ စနစ်များ၊ ရေယာဉ် ခုတ်မောင်းနေစဉ် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အခြားသိသင့် သိထိုက်သည်များကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာခဲ့ကြပြီး တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် သန်လျင်တပ်နယ်ရှိ ရေတပ်သင်္ဘောကျင်း ဌာနချုပ်သို့ ရောက်ရှိကြပြီး သင်္ဘော တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ လွန်းတင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသော ရေယာဉ်များ၏ ပြုပြင်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ Shiplift System ဖြင့် ရေယာဉ်များ လွန်းတင်/လွန်းချ စနစ်များနှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများရှိ တွင်ခုံ၊ ဖောက်ခုံ၊ ရေဘော်ခုံများသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းပြသကြသည်။
ထို့နောက် ညနေပိုင်းတွင် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် သန်လျင်တပ်နယ်၊ တပ်နယ်ခန်းမသို့ ရောက်ရှိကြရာ ရေတပ်လေ့ကျင့်ရေး ဌာနချုပ်၏ လေ့ကျင့်ရေး တာဝန်များကို တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများသည် ရေတပ်လေ့ကျင့်ရေး ဌာနချုပ်ရှိ ရေကြောင်းပြခန်း၊ တပ်မတော်(ရေ) ဗဟိုစာကြည့်တိုက်၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးခန်းမ၊ နက္ခတ်တာရာပြခန်း၊ DMO ရှိ Ship Handling Simulator (A)နှင့် Engine Room Simulato r ၊ ဥတ္တရဆောင်ရှိ စာသင်ခန်းများ၊ RAS &Towing Training? Mechanical and Electrical Trainer? Welding Simulator? Damage Control Simulator-Zamani နှင့် သမိုင်းဝင် စစ်ရေယာဉ် (မေယု)တို့သို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Read 65 times Last modified on Wednesday, 15 May 2019 08:47
More in this category: « ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်အတွင်း တပ်မတော်နယ်လှည့် အထူးဆေးကုသရေး အဖွဲ့က ဒေသခံ ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက် အခြေခံပညာ စာသင်ကျောင်းများ၌ စုပေါင်း သန့်ရှင်းရေးများ ပြုလုပ် »